‘५ नं. प्रदेशमा नयाँ शक्तिलाई भोट हाल्न धेरै जनता आतुर छन्’ | नयाँ शक्ति नेपाल
‘५ नं. प्रदेशमा नयाँ शक्तिलाई भोट हाल्न धेरै जनता आतुर छन्’
- २३ जेठ २०७४
उत्प्रेरक, ५ नं. प्रदेश, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरण आउँदै गर्दा ५ नं प्रदेशको चुनावी तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
गत जेठ ६ गतेदेखि स्थानीय तह निर्वाचन दोस्रो चरणको तयारीका लागि हामीले दाङबाट अभियान सुरु गरेका हौं । हामी काठमाडौंबाट जाँदा पनि शुभचिन्तकहरुसँग ठाउँठाउँमा भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौं । कपिलवस्तुमा पनि हामीले त्यस्तैखालको कार्यक्रम गर्‍यौं । साथीहरु उत्साहजनक तरिकाले लागिरहनुभएको छ । नयाँ शक्तिलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउनुपर्छ, नयाँ जोश र जाँगरका साथ नयाँ शक्ति बनाउनु पर्छ भन्ने हिसावले साथीहरुले काम गरिरहनुभएको छ ।
अरु पार्टीहरु पैसाको खोलो बगाएर निर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन् । उनीहरु मदिरा र पैसाको भरमा जनतालाई भ्रममा पार्न सकिन्छ कि भनेर दौडधुप गरिरहेका छन् । तर नयाँ शक्ति पार्टी जनताको खास एजेन्डासहित निर्वाचन प्रचारप्रसारमा केन्द्रित भएर जनताको आँगनमा पुगेको छ । पाँच नम्बर प्रदेशका जनता नयाँ शक्तिको विचार र एजेन्डाबाट प्रभावित भएर नयाँ शक्तिको पक्षमा मतदान गर्न आतुर रहेका छन् ।
नयाँ शक्तिलाई जनताले कत्तिको विश्वास गर्लान त ?
हामी जहाँजहाँ पुगेका छौं, त्यहाँ त्यहाँ नयाँ शक्तिप्रति जनताको आकर्षण व्यापक छ । हामीले सबै दललाई हेरिसक्यौं अब नयाँ शक्ति पार्टीलाई हेर्न बाँकी छ भन्ने आश्वासन जनताबाट पाएका छौं । नयाँ शक्ति पार्टीले मात्रै यो देशको विकास गर्छ, आर्थिक हिसाबले जनतालाई समृद्ध बनाउँछ भन्ने विश्वास ५ नम्बर प्रदेशका जनतामा छ । म जहाँ–जहाँ गएको छु, त्यहाँका जनताको नयाँ शक्तिप्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति पाएको छु ।
जनता नयाँ शक्तिप्रति साँच्चै आकर्षित भएका हुन् त ?
नयाँ शक्तिप्रति जनताको आकर्षण बढेकै छ । मैले र मसँगै मेरो कार्यक्षेत्रका साथीहरुको भनाई पनि त्यस्तै पाएको छु । ५ नम्बर प्रदेश थारुहरुको बाहुल्यता भएको क्षेत्र हो । थारुहरुको बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा थारुहरुलाई राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउनका लागि हामीले पहलकदमी लिन जरुरी छ । किनकि हामीले पहिले उत्पीडित थारुहरुको आवाज उठाउने हो । हामी थारु समुदायको मुद्दा समेत उठाइरहेका छौं । नयाँ शक्ति पार्टीले थारुमात्रै होइन, यो देशका सबै उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हक अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आइरहेको छ । त्यसो हुनाले हिमाल, पहाड, तराई/मधेसमा बस्ने सम्पूर्ण जनताको आशा नयाँ शक्तिमा छ । यस अर्थमा पनि नयाँ शक्ति पार्टीप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कस्तो परिणाम आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
नयाँ शक्तिको लोकप्रियताबाट आत्तिएका शासकहरुले नयाँ शक्ति विरुद्ध षड्यन्त्र गरेर निर्वाचन चिन्ह समेत दिएनन् । हामी निर्वाचनमा नजाँदा चुनाव विरोधी भनेर आरोप लाग्थ्यो । त्यसैले हामीले संघीय समाजवादी फोरमसँग कार्यगत एकता गरेर साझा चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी भयौं । तर छोटो समयमा हामीले निर्वाचन चिन्ह बुझाउन पनि अलि सकेनौं, पहिलो चरणको चुनावमा सोचेजस्तो परिणाम आउन सकेन । गोरखा लगायतका केही ठाउँमा त ज्येष्ठ नागरिकहरुले बाबुरामको पार्टीलाई भोट दिएको भनेर हँसिया हतौडामा भोट दिनुभएछ । तर अनेकौं व्यवधानका बीचमा पनि प्राप्त मतलाई हामीले सन्तोषजनक नै मानेका छौं ।
अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जनताले हामीप्रति थप माया र विश्वास गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । कुन पार्टी कस्तो हो भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन् । त्यसो भएको हुनाले नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले अब हुने निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा विजय हासिल गर्नेछ । ७ नं. प्रदेशको बारेमा पनि म जानकार छु । कैलालीको भीमदत्त नगरपालिकामा हाम्रो अवस्था मजबुत छ । पुनर्वास, भजनी, कैराली, गौरीगंगा, चुहा–लम्कीलगायतका ठाउँहरुमा हाम्रो निकै राम्रो सम्भावना छ । दाङको राप्ती गाउँपालिकामा नयाँ शक्ति पार्टीको जीत पक्का छ । बर्दियामा पनि ठूलो पंक्ति नयाँ शक्तिमा सहभागी हुँदैछ । त्यसैगरी अन्य क्षेत्रमा पनि हामीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशमा नयाँ शक्तिको अवस्था मजबुत छ । आगामी निर्वाचनले त्यो कुरा पुष्टि गर्दछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा धेरै मत बदर भयो । अबको चुनावमा मत बदर नहोस् भनेर जनतालाई बुझाउनुभएको छ कि छैन ?
हामीले जनतालाई त्यस किसिमको शिक्षा दिइरहेका छौं । हामीले नमूना मतपत्र बनाएरै भोट हाल्ने तरिका सिकाइरहेका छौं । त्यसैले अबको निर्वाचनमा मत बदर हुने सम्भावना अलि कम हुने अपेक्षा गरेका छौं ।